Myanmar Websites with Genius Unicode fonts — MYSTERY ZILLION
Myanmar Websites with Genius Unicode fonts
August 2014 in Web Development
This time, I want to discuss and ask about myanmar unicode fonts. In this website, Some Unicode fonts are used. Right? And I can read the discussions well. Although I don't know that there's unicode font in my browser or not. But I can read all your discussions. How did you do that? That's the first question. Second one is some other websites also use other Unicode fonts. But unreadable. What's the problem here? And how will you solve it?
ကျွန်တော်တို့တွေ CSS web embed font ကို အသုံးပြုထားလို့ပါ။ ဒါကြောင့် browser မှာ မြင်ရတာပါ။
မြန်မာ unicode အတွက် CSS font embed ကို http://mmwebfonts.comquas.com/ မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
တချို့ website တွေက မမြင်ရတာက ၂ မျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၁။ မြန်မာ unicode သုံးထားပြီးတော့ font embed မထည့်ထားခြင်း။
font embed မထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် အသုံးပြုသူ စက်ထဲမှာ font မရှိ ရင် မမြင်ရပါဘူး။ အသုံးပြုသူစက်ထဲမှာ myanmar3သွင်းထားတယ်။
၂။ CSS font family မတူခြင်း
Unicode font က အမျိုးမျိုး ရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် CSS font family ကိုလည်း သေချာ ကြေငြာထားဖို့လိုပါတယ်။
website က mon3သုံးထားတယ်။ CSS မှာ mon3တစ်ခုပဲ ကြေငြာထားရင်လည်း ဖတ်လို့ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ font family မတူတာကြောင့် ပါ။ မြန်မာ unicode မှာ font တွေက ၁ ခု ထက် မက ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့် website မှာ သုံးထားတဲ့ font ဒါမှမဟုတ် font family အကုန်လုံးကို ကြေငြာထားဖို့ လိုပါတယ်။
Thank you so much. Another question I want to ask is how can I solve it? How can I solve to read that website with unreadable myanmar fonts?
I already answer there
You need to use CSS font embed in website to see font correctly.
ကျွန်တော် မေးချင်တာက User PC View နဲ ့ပါ။ Websites တွေက Unicode သုံးတယ်။Font embedded မသုံးလို ့သော်လည်းကောင်း Font Family မစုံလို ့သော်လည်းကောင်း ကြည့်တဲ့ ကွန်ပျုတာဘက်က အဆင်မပြေဘူးဗျာ။အဲ့တာက အဆင်ပြေပြေကြည့်ချင်တယ်။ဒါဆို User ဘက်က အနေနဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းလို ့ရနိုင်မလဲ မသိဘူးခင်ဗျ???
ကျွန်တော်ကတော့ Zawgyi Force နဲ့ Unicode Force ကို သုံးတယ်။ http://bookmarklet.saturngod.net/ မှာ bookmarklet ရှိတယ်။ bookmark ထဲမှာ ထည့်ထားပြီး ပြောင်းသုံးတာပဲ။ facebook လိုမျိုး နေရာမှာ unicode နဲ့စာကို ဖတ်ချင်ရင် Unicode Force သုံးပြီး ပြန်ပြီးတော့ ဇော်ဂျီ ကို ဖတ်ချင်ရင် zawgy force ကို သုံးလိုက်တာပဲ။
Browser ရဲ့ bookmark ထဲမှာတော့ scrip ထည့်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
Safari သုံးရင် ဒီဟာကိုဖတ်ပါ။
Chrome ဆိုရင်တော့ အောက်က Plugin နဲ့ စမ်းကြည့်ပါ ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ Site တွေက Font Family မမှတ်ဘူးဆိုရင် Plugin တွေက Default Font နဲ့ အစားထိုးပေးလိမ့်မယ်။